Afar ka mid ah diyaaradaha Turkish Airlines oo maanta kasoo wada degay Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Afar ka mid ah diyaaradaha Turkish Airlines oo maanta kasoo wada degay Muqdisho (SAWIRO)
Illaa afar diyaaradood oo ay leedahay shirkadda Turkish Airlines ayaa maanta si kala gaar ahaaneed uga kala soo degtay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo waday rakaab badan oo 4-tii maalmood ee ugu dambeysay dib u dhaca ku yimid.
Labo ka mid ah diyaaradahaasi ayaa la sheegayaa inay kasoo kicitimeen magaalada Mombasa ee dalka Kenya, halkaas oo labadii maalmood ee ugu dambeysay ay ku sugnaayeen, kadib markii maalmihii Jimcaha iyo Sabtida ay u suurto-geli weysay inay kasoo degtaan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Ciladda ugu weyn oo ay diyaaradahaasi ugu soo degi waayeen garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ayaa lagu sheegay inay ahayd cimilada hawada magaalada Muqdisho oo xilliyadaasi xumeed iyo dableylo xoogan oo ka jiray dhinaca badda.
Diyaaradaha Turkish Airlines ayaanan loo ogoleyn in magaalada Muqdisho ay dul maraan arrimo amni awgeed, waxaana ay garoonka Aadan Cadde kasoo galaan dhinaca badda ah, maadaama meeshaas ay tahay meesha kaliya uu amnigeeda ku bad-baadi karo.
Si kastaba ha ahaatee, waa markii u horeeysay oo 4 diyaaradood ay leedahay shirkadda Turkish Airlines hal maalin gudaheed ah kasoo wada degtaan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, tan iyo markii ay duulimaadyadeeda si rasmi ah halkaasi uga bilawday sanadkii 2012-ka.